पूर्वसचिव पत्नी ह’त्या प्र’क’र’णमा श्रीमान् नै अहिले शंकाको घेरामा ! नेपाल खबर कान्तिपुर – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/पूर्वसचिव पत्नी ह’त्या प्र’क’र’णमा श्रीमान् नै अहिले शंकाको घेरामा ! नेपाल खबर कान्तिपुर
पूर्वसचिव पत्नी ह’त्या प्र’क’र’णमा श्रीमान् नै अहिले शंकाको घेरामा ! नेपाल खबर कान्तिपुर
काठमाडौ । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना कार्की डेढ साताअघि घरभित्रै मृ त अवस्थामा फेला परेकी थिईन । उक्त घ टना मा घरको कामदार पनि मृ त अवस्थामा भेटिएका थिए जसले गर्दा यो घ टना थप रहस्यमय बनेको थियो । पछिल्लो अनुसन्धान क्रममा प्रहरीको हात थप नयाँ तथ्यहरु फेला परेको जनाईएको छ ।
जनआस्था पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रहरीको शंकाको घेरामा अहिले पूर्वसचिव अर्जुन कार्की समेत परेका छन् । तर अहिले प्रहरीले १३ औँ पुण्यतिथिका दिनसम्म घ टना का थप तथ्य बाहिर नल्याउने नीति बनाउँदै अनुसन्धान गरिरहेको छ । अ प राध महाशाखाबाट अनुसन्धानरत एक प्रहरीले जनआस्थासंगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘धा रिलो ह ति यार वा बि ष्फो टक पदार्थ (ब न्दुक) को प्रयोगबाट गरिएको ह त्या थियो भने एक्लो संलग्नता पत्यारिलो हुन्थ्यो तर मुनाको ह त्या सहजै पत्यारिलो छैन जसरी दुनियाँ अझै पनि दरबार ह त्या का ण्डमा बाबु, आमासहित काका, फूपू र भाइबहिनीलाई दीपेन्द्रले मा रे को भन्नेमा अझै विश्वस्त छैन ।’
यस घ टना को सुरुवाती क्रममा आएका विवरण अनुसार कामदार विजय कार्कीलाई दो षी अनुमान गरिएको थियो तर प्रहरीले अहिले थप अनुसन्धानको क्रममा धेरै ग म्भीर प्रश्नहरु तेर्साएका छन् र यहि अनुरुप अनुसन्धान हुँदैछ । सिसिटिभी फुटेजमा देखिए अनुसार कामदार विजयले मुनामाथि नीलो प्लाष्टिकको पिर्काले निरन्तर हा ने को देखिन्छ र यो मुख्य अनुसन्धानको विषय बनेको छ कि प्लाष्टिकको पिर्काले मात्रै हा न्दा कसैको ज्यान जान्छ कि जादैन ?
अनुसन्धान कै क्रममा तेर्सिएको अर्को ग म्भीर प्रश्नस् कामदारको नियत ख राबले गर्दा मुना कार्कीलाई घाँ टी थि चेर मा र्न खोज्दा चूपचाप त थीइनन होला । रोदन, गुहार वा चि त्का रको आवाज छिमेकीले सुने कि सुनेनन् वा आवाज रोक्न भोकल कर्ड (घाँटीबाट आउने आवाज) अ व रोध गरिएको थियो कि ? यदी त्यस्तो थियो भने एक कामदारले यस्तो विषयमा तालिम वा ज्ञान कसरी पाए वा परिचालित थिएकि ? साथै घ ट ना हुनुअघि पूर्वसचिव कार्की, मृ त क मुना र कामदार विजयको मोबाइलमा भएका संवाद, एसएमएस आदान–प्रदानको विवरण समेत प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कुरिरहेको छ ।
अनुसन्धानले ल्याएको अर्को पाटोले अर्जुन कार्की माथी समेत केहि प्रश्न तेर्साएको छ । कार्कीको घर भित्र रहेको सिसिटिभीको फुटेज आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सकिन्थ्यो । उनले घरमा को आउँछ को जान्छ, पत्नी भएको नभएको र घरमा को आयो को गयो हेर्न सक्थे । यसले गर्दा कार्कीलाई पछिल्लो केहि दिनको फुटेज अनुसार विजयको मानसिक परिवर्तन देखि कुनै आशंका थियो कि जसले गर्दा त्यस दिनको स्थति आयो भन्ने अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
किन्ने हो भीआर बाइक ? यस्तो छ नयाँ मूल्य
काभ्रेका दुइ जनामा भेटियो कोरोना पोजेटिभ
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् बजार भाउ
नेपालमा शं कास्पद १८ मध्ये १ जनामा कोरोना देखिएपछि रुवा बासी चल्यो(भिडियो)